PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-05-14 - Akanankinga yokubuyela kwiDowns uma bezomdlalisa
Akanankinga yokubuyela kwiDowns uma bezomdlalisa
Isolezwe ngeSonto - 2017-05-14 - EZEMIDLALO -
eHarry Gwala Stadium, eMgungundlovu ukuvezile ukuthi amaBrazilians asemkhumbuzile ukuthi kufanele abuye ekhaya. Kuvele ukuthi iSundowns ifuna uR 3million ngoNtuli oshayele iStars amagoli amathathu kule sizini emidlalweni yeligi.
“Okwamanje angikakazi kodwa nginawo umbandela wesizini neSundowns. Kodwa okwamanje angikakazi ukuthi kuzokwenzekani. Anginankinga nokuphindela khona inqobo nje uma ngizodlala. Noma iyiphi engingaya kuyona inqobo nje uma ngizodlala ngizokweneliseka,” kusho uNtuli.
“Umqeqeshi (Pitso Mosimane) ubengakakhulumi nami kodwa bakhulumile nemenenja yami. Bashilo ukuthi ngisewumdlali wabo ngoba bangenzela umbandela ngesikhathi ngihamba kuyona.”
Nakuba kubukeka iSundowns imfuna uNtuli kodwa mancane amathuba okuthi ayithole indawo eqenjini likaMosimane. Ngesikhathi ebolekiswe kuMaZulu, uMosimane wachazeka ngendlela adlala ngayo waphinda wambolekisa sekufanele amphendlele indawo eChloorkop. UNtuli ungomunye wabagadli abajwayele ukuyibhakuzisa inethi kuwona wonke amasizini kodwa eka-2016/2017 imfikele nesomiso. Abanye abagadli abaziwayo abadonse kanzima kule sizini nguLehlohonolo Majoro weCape Town City oshaye ayisithupha, Eleazar Rodgers weBidvest Wits oshaye amathathu kuphela, Collins Mbesuma weHighlands Park oshaye inethi kathathu emidlalweni yePremiership.
“Isizini ngiyiqale kabi ngokulimala. Ifomu ibuye sekuhambe isikhathi. Ngizolungisa ngesizini ezayo ukuthi ngiqale ngegiya eliphezulu,” kusho uNtuli.